Iidijithali zemali: i-Bitcoin, i-Ethereum, i-Litecoin, i-Dash, ... konke malunga nee-cryptos | Iindaba zeGajethi
El kwihlabathi leemali zedijithali Iya isomelela yonke imihla. Kwiminyaka embalwa edlulileyo, inani labatyali mali kwii-cryptocurrensets zazimbalwa, kodwa mihla le abantu bayanda kule nguqu yotshintsho ebandakanya ukungena kwemali yeemali kwiimarike zezemali.
Ngaba uyazi ukuba yintoni iBitcoin? Ngaba ungayithanda thenga iBitcoins? Ingaba uyazi yintoni i-ethereum Kwaye uyawazi amandla anokuthi akunikwe leli qonga? Yintoni ifolokhwe yeBitcoin? Yintoni umahluko phakathi kweBitcoin kunye neBitcoin Cash? Yeyiphi imali yeLitecoin kwaye yahluke njani kwiBitcoin? Yintoni i-ICO kwaye ndenza kanjani imali kuyo? Zeziphi ii-cryptocurrensets eziza kunyusa ixabiso lazo kakhulu kwiinyanga okanye kwiminyaka ezayo?
Yonke le mibuzo yile nto abantu abaninzi bazibuza yona yonke imihla kwaye ukusuka kwi-Actualidad Gadget siza kukunceda uliqonde eli candelo litsha kangangoko.
Amanqaku abalulekileyo malunga nee-Cryptocurrensets
Ukuba uqala emhlabeni wee-cryptocurrencies ngoko la manqaku aza kukunceda kakhulu.
Cwangcisa i Bitcoin: yintoni i-Bitcoin, isebenza njani kunye nendlela yokuthenga i-bitcoins
Thenga i-Ethereum: yintoni i-Ethereum kunye nendlela yokuthenga i-Ethers.
Thenga iLitecoinyintoni iLitecoin kunye nendlela yokuyithenga
IHashflare, iqonga lemigodi yemigodi ye-cryptocurrency.
Iindaba zeDijithali zemali kunye neeTutorials
Fumanisa i Iindaba zamva nje ze-cryptocurrency kunye nezifundo ukuze ukwazi ukutyala imali kwaye usebenze kweli candelo ngesiqinisekiso esipheleleyo.
Amaxesha okwehla kweBitcoin, ixesha lotyalo-mali?
por UMiguel Gaton yenzayo 2 iminyaka .
Emva kwawo onke amahla ndinyuka ahamba nobomi be-imali yedatha kwimbali yayo, ...
por Iindaba zeGajethi yenzayo 3 iminyaka .
Nangona ungasoloko uhlala njengembovane ebalini, akunangqondo ukwenza njengecicada kuphela, kwaye ...
Ii-cryptocurrensets kudala zishiya i-niche yokufuna ukwazi ukuba, ngokwazo, i ...
I-United States iphanda ngexabiso elinokubakho kwi-Bitcoin
Imakethi ye-cryptocurrency, kunye neBitcoin ekhokelayo, ayinawo unyaka ubalaseleyo. Ixabiso lalo liwile ...
I-Facebook iceba ukumilisela eyayo imali yedijithali
Ukukhawuleza kwemali ye-cryptocurrency akukapheli. I-2018 ayiqinisekanga ngokupheleleyo kule marike, ...
Kwezi nyanga sibona ukuba zingaphi iinkampani ezibheja kwiBlockchain, uninzi lwazo oluzijonga njengetekhnoloji yexesha elizayo. Nayo…
I-Telegraph iyicima i-ICO yayo emva kokuphakamisa i-1,7 yezigidigidi zeedola
Kwixesha elidlulileyo iTelegram ibhengeze ukungena kwayo kwimakethi ye-cryptocurrency ngeGram. Ukuqala le projekthi, ...
Ukubuyela umva okukhulu kweWikiLeaks. Ukusukela iakhawunti abanayo eCoibase ivaliwe. Isigqibo ...
Umkhuhlane we-cryptocurrency ubonakala ungekafiki esiphelweni. Kuba abasebenzisi abaninzi bayaqhubeka nokumba i-Bitcoin ...
Kuwo wonke u-2017, sikwazile ukubona ukuba i-cryptocurrensets, ezinje ngeBitcoin, i-Ether kunye nezinye, ziye zadubula njani ...
Iqela leenjineli ezisebenza kwiZiko leNyukliya lase-Russia, indawo eyimfihlo yenyukliya, ...